အင်ဒိုနီးရှား ၂၀၁၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရုတ်အလုပ်သမား ပြဿနာကြောင့် ဂယက်ရိုက်နိုင်
အင်ဒိုနီးရှား ၂၀၁၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရုတ်အလုပ်သမား...
16 เม.ย. 2562 - 01:52 น.
နိုင်ငံ အခြေခံ အဆောက်အဦ ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ဖို့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို ကြိုဆို
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ လာမယ့် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မှာပါ။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေ မြင့်တက်လာနေချိန်မှာပဲ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ စီးပွားရေး ကိစ္စတွေကို အကြောင်းပြပြီး အပြိုင်အဆိုင် မဲဆွယ်နေခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ထပ် သမ္မတသက်တမ်းအတွက် ဝင်အရွေးခံမယ့် သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို ကတော့ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦ ခိုင်မာအောင် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက် ကြီးနဲ့ တရုတ်ရဲ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေကို ကြိုဆိုခဲ့သလို နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ချေးငွေတွေနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
သူ့ပြိုင်ဖက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ပရာဘိုဝို ဆူဘီယန်တို က သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို ဟာ တိုင်းပြည်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေလက်ထဲ ရောင်းစားနေတယ်လို့ စွပ်စွဲထားပါတယ်။ တရုတ် အလုပ်သမားတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာနေတာကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ခံနေရတယ်လို့ အတိုက်အခံအမတ်တွေ ကလည်း ပြောနေပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ တရုတ် ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဟိုးကတည်းက မကြာခဏ ဆိုသလို ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် နှစ်ကာလမျိုးမှာ ဒီကိစ္စဟာ အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာနေပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ လူမှုကွန်ရက်က ပြောသမျှအတိုင်း လူတွေက ယုံကြည်နေကြပြီး နိုင်ငံထဲမှာ တရုတ်အလုပ်သမား အရေအတွက်တွေ များလာတယ် ဆိုတဲ့ ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုမှုတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာခါနီး အချိန်မျိုးမှာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား မိုင်းတွင်းပြိုကျမှု လူဒါဇင်နဲ့ချီ ပိတ်မိနေ
အခုနှစ် ဇန္နဝါရီလတုန်းက ဆူလာဝေဆီကျွန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မိုရိုဝါလီမြို့က စက်မှုဝင်းတခုမှာ အလုပ်သမားတွေ ထောင်သောင်းချီ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဗီဒီယို ပုံတခုကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ လူတွေ အများအပြား ပြန်ဝေမျှခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ ဗီဒီယိုထဲမှာ ဆန္ဒပြနေသူတွေက အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားမှာ လာအလုပ်လုပ်တဲ့ တရုတ် အလုပ်သမားတွေက သူတို့ထက် လစာငွေ ပိုရတာ၊ သူတို့အလုပ်တွေကို ယူလုပ်နေတာတွေကို ကန့်ကွက် နေကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူသားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးကတော့ ဒီပြောဆိုချက်တွေကို ပယ်ချလိုက်ပြီး အဲဒီဗီဒီယိုဟာ လစာငွေ တိုးတောင်းတဲ့ ကိစ္စသာ ဖြစ်ပြီး တရုတ် အလုပ်သမားတွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ မဟုတ်မမှန် သတင်းတွေ ဖြန့်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ လူတစ်ဦးကိုလည်း ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
တချို့ကလည်း လေဆိပ်တွေက တရုတ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရဲ့ ပုံတွေအောက်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထဲ အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာတဲ့ တရားမဝင် တရုတ် အလုပ်သမားတွေ ဆိုပြီး စာတမ်းထိုးထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ ပြန်ဝေမျှ ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လတုန်းကလည်း ဂျားဗားကျွန်းပေါ်က သံမဏိ စက်ရုံတခုကနေ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ ထွက်လာနေပုံ ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုတခု လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့အပြီး အဲဒီ စက်ရုံက သူတို့မှာ တရုတ် အလုပ်သမား ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ ဆိုတာကို အများသိအောင် ထုတ်ဖော် ကြေညာပေးခဲ့ရပါတယ်။
ပရာဘိုဝိုက ဘာတွေ စွပ်စွဲနေသလဲ
မဲဆွယ် စည်းရုံးစဉ်တုန်းကတော့ မစ္စတာ ပရာဘိုဝိုက တရုတ် အလုပ်သမားတွေကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်း ပြောဆိုတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်ဒိုနီးရှားမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာရောက် အလုပ်လုပ်ခွင့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မြန်ဆန်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုက နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား စည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တာကိုတော့ ကန့်ကွက် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံခြားသား ဆန့်ကျင်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကိုတော့ အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကို တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာကျန်တော့မှာလဲ" လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေကို တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ရင် အင်ဒိုနီးရှားအလုပ်သမားတွေအတွက် ဘာမှကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ပရာဘိုဝိုက ဆို
ဒါ့အပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ တခြား နိုင်ငံတွေ ဆီကနေ သင်ခန်းစာ ယူသင့်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
"အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေ ဝင်မလာအောင် တံတိုင်း ကာချင်နေတယ်။ သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှာဆိုရင် နိုင်ငံထဲ ခိုးဝင်လာသူတွေကို တကျွန်းပို့ပစ်တယ်"လို့ မစ္စတာ ပရာဘိုဝိုက မဲဆွယ်ပွဲ မတိုင်ခင် မိန့်ခွန်းတခုမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
စင်္ကာပူနဲ့ ဂျပန် ပြီးရင် တရုတ်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ တတိယ အကြီးဆုံး တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စောင့်ကြည့် လေ့လာနေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရ အေဂျင်စီက ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက စလို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေက ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလျံနီးပါး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ သူတို့ရဲ့ စာရင်းဇယား တွေမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ညှိနှိုင်းရေး ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းဇယား
အင်ဒိုနီးရှားမှာ တရုတ်က လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ စီမံကိန်းတွေထဲက တချို့ကတော့ ပြဿနာ ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျကာတာနဲ့ အနီးဆုံး ဘန်ဒန်းမြို့ အကြားမှာ မြန်နှုန်းမြင့် ရထားလမ်း ဆောက်လုပ်တဲ့ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလျံတန် စီမံကိန်းကလည်း နှောင့်နှေးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
မြောက်ဆူမာထြားမှာ တရုတ်ဘဏ်ကြီးက ကူညီ ထောက်ပံ့နေတဲ့ ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလျံတန် ရေအားလျှပ်စစ် ဆည်ကြီးတခု ဆောက်လုပ်နေတာကို တားဆီးဖို့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့တွေက တရားရုံးမှာ ဥပဒေကြောင်းအရ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အဲဒီဆည်ကြီးကြောင့် ရှားပါးမျိုးနွယ် အော်ရန်အူတန် လူဝံတွေ မျိုးတုံးမယ့် အန္တရာယ် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘော်နီယိုကျွန်းမှာလည်း တရုတ်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီတခုကဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလျံ နီးပါးတန် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံတခု တည်ဆောက်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရက တရုတ်ဆီက ဒေါ်လာ ၆၉ ဘီလျံလောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက် ရနိုင်မယ့်ပုံ မရှိဘူးလို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်း လေ့လာ သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဖန် ဆီယူး က ပြောပါတယ်။
တရုတ် အားပေးထောက်ခံတဲ့ ဒီလိုစီမံကိန်းတွေက သူတို့ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချဖို့နဲ့ အလုပ် ပိုတွင်ကျယ်စေဖို့အတွက် တရုတ် အလုပ်သမားတွေကိုပဲ အလုပ်ခန့်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား အရေအတွက်ကို တွက်ချက်ဖို့ အတိကျဆုံးနည်းကတော့ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ်တွေ ဘယ်လောက် ထုတ်ပေးထားသလဲ ဆိုတာကနေ လေ့လာ ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်
အင်ဒိုနီးရှားမှာ တရုတ်က နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ပါမစ် အများဆုံး ရထားပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက အရေအတွက် ၂ ဆ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စုစုပေါင်း ပါမစ် သုံးသောင်း ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဒီအရေအတွက်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ တရုတ်အလုပ်သမား သန်းပေါင်းများစွာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ တချို့ ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုမှုတွေထက် အများကြီး လျော့နည်းနေပါတယ်။
အရင်အစိုးရတွေထက် လက်ရှိအစိုးရက နိုင်ငံအခြေခံ အဆောက်အဦအတွက် ငွေပိုရှာပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဆရီ မူလီယာနီ ပြော
ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဖွဲ့ကြီးကလည်း၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေဟာ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားထုကြီးရဲ့ သုည ဒဿမ သုညခြောက် ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား အရေအတွက်ထက် အများကြီး နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အင်ဒိုနီးရှားမှာ အစိုးရ ထုတ်ပေးတဲ့ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် အရေအတွက်ထက် အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ တရုတ်အလုပ်သမား အရေအတွက်က အများကြီး ပိုများကောင်း များနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် များသလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိဖို့ ခက်ပါတယ်။
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် သိပ်မရှိတဲ့ တရုတ် အလုပ်သမားတွေ သိန်းနဲ့ ချီပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထဲကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား ဗီဇာနဲ့ ဝင်လာနေကြတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမား သမဂ္ဂ KSPI က ပြောပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရကတော့ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားတွေဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တရုတ် အလုပ်သမားတွေဆီကနေ သင်တန်းတွေ ရနိုင်တယ်။ တရုတ် အလုပ်သမားတွေ ပြန်သွားတဲ့အခါ ဒေသခံ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားတွေက လုပ်ငန်းတွေ လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရလာမယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။
ဒီတော့ စုဆောင်း ရရှိတဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ တခြားတိုင်းပြည်တွေကနေ လာအလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်သမား အရေအတွက်ဟာ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားထု စုစုပေါင်းရဲ့ အစိပ်အပိုင်း အနည်းငယ်လောက်သာ တွေ့ရတာမို့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ တရုတ်အလုပ်သမားတွေ အများကြီး ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပြီး ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း လွယ်လွယ်နဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အင်ဒိုနီးရှား ၂၀၁၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရုတ်အလုပ်သမား ပြဿနာကြောင့် ဂယက်ရိုက်နိုင်